Maxay Isku Diyaarineysaa Websiteka? 5 Nidaamyada laga bilaabo Naqshadaynta si looga hortago soo xiritaanka bogga aan sharciga ahayn
Webka xoqitaanka, oo loo yaqaano goosashada webka, Soo saarid, waa tiknoolaji kaa caawiya abaabulida iyo soo saarida macluumaadka mid ama ka badan bogag internetka. Waad bedeli kartaa URL-yada kala duwan adigoo isticmaalaya foomka CSS, JSON, REGEX, iyo XPATH faylasha. Sidaa daraadeed, duubista shabakadda waa geedi socod adag oo ah ururinta macluumaadka si toos ah shabakadda. Barnaamijyada xajinta webka ee hadda iyo xalalka waxay kala duwanyihiin ad-hoc si nidaamsan oo isdaba-joog ah oo u bedeli kara boggaga ama blogyada oo dhan macluumaadka faa'iido leh oo wanaagsan.
Siyaabaha looga hortagi karo bogga internetka ee sharci darada ah:
Webmaster wuxuu isticmaali karaa tallaabooyin kala duwan si loo yareeyo ama loo joojiyo qalabka waxyeellada leh. Hababka ugu waxtar badan ayaa lagu sharaxay hoosta:
1. Jooji cinwaanka IP:
Waa inaad xirto spammers cinwaanka IP ama gacanta qalab lagu kalsoon yahay.
2. Diido adeegga internetka APIs:
Waa wanaagsan tahay in la joojiyo adeegga internetka ee APIs ee soo bandhigi kara nidaamyada. Xeebaha isticmaalaya xarrumaha wakiilada ayaa lagu xakameyn karaa farsamadan iyada oo aan dhibaato jirin.
3. La soco socodka gaadiidkaaga webka:
Waa mid muhiim u ah dhammaanteen in aan la socono taraafikada webka iyo sidoo kale tayada. Haddii aadan adeegsan adeegyada SEO oo weli helaya aragtiyo badan oo aragtiyo ah, waxaa laga yaabaa inaad ku dhufatey baaskiil.
4. Waa in aad isticmaashaa qaababka la xayiray si aad uga takhalusatid boksadaha xun iyo sawirada bogagga . Badanaa, qaanadaha ma ogaan karaan qoraalka ku qoran jariidadda oo aan awoodin inay ka jawaabaan caqabadaha noocan oo kale ah. Habkani, waxaad heli kartaa gaadiidka dadweynaha kaliya oo ka takhalusi bots.
5. Adeegyada ka hortagista ganacsiga:
Shirkado badan oo badan ayaa bixiya barnaamijyo antivirus iyo anti-bot. Waxa kale oo ay leeyihiin adeegyo badan oo ka hortag ah oo la xidhiidha websaydhka, bloggers, kuwa horumariya, iyo barnaamijyadaba. Waxaad ka faa'iideysan kartaa mid ka mid ah adeegyadan si aad uga takhalusto websaydh sharci darro ah.
Labo siyaabood oo kala duwan oo loo isticmaalo shabakadaha bogagga internetka:
Iyadoo sawir gacmeed leh, si fudud ayaad u dhisan kartaa boggaga internetka si aad u soo saarto xog muhiim ah naftaada.
1. Qalabka iyo qiimaha gawaarida:
Waxaa la caddeeyay in qiimeeynta sicirka ay gacan ka geysan karto hagaajinta faa'iidada guud boqolkiiba labaatan iyo labaatan. Marka badeecadaha iyo qiimaha la gooyey, waxay kuu sahlanaan doontaa inaad ogaato sida ganacsigaaga loo kobcin karo internetka iyo sida loo iibiyo tirada ugu badan ee alaabta iyo adeegyada. Habkani waxaa si ballaaran loo isticmaalaa websaydhyada safarka, shirkadaha e-commerce, iyo shirkadaha kale ee internetka la mid ah.
2. Kusoo dhowaanshahaaga joogitaankaaga internetka si fudud:
Waa waji muhiim ah oo weyn oo ka mid ah duullimaadyada websaydhka halkaasoo ganacsiyada lagu sharxayo iyo dib u eegista goobaha la xoqay. Waxaa loo isticmaalaa in lagu hubiyo waxqabadka sheyga gaarka ah ama adeegga, falcelinta iyo dabeecadaha isticmaalaha, iyo mustaqbalka ganacsiga. Istaraatiijiyadan shabakada ah waxay gacan ka geysan kartaa sameynta liisaska iyo jadwalka ku salaysan dib u eegista dadka isticmaala iyo falanqaynta ganacsiga Source .